Samachar Batika || News from Nepal » रणविरले कोरोनालाई जिते लगत्तै आलियालाई सं’क्रमण सुरु,फ्यानले गिज्याए: अझ कतिन्जेली छुटिनुपर्ने हो जोडी ?
रणविरले कोरोनालाई जिते लगत्तै आलियालाई सं’क्रमण सुरु,फ्यानले गिज्याए: अझ कतिन्जेली छुटिनुपर्ने हो जोडी ?
काठमाडौं- बलिउड नायिका आलिया भट्टलाई पनि कोरोना सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । प्रेमी रणवीरलाई कोरोना लागिकन निको भएको एक साता नबित्दै आलियालाई कोरोना पुष्टि भएको हो । आलियाले इन्स्टाग्राममा आफू कोरोनाको सं’क्रमणमा परेको जानकारी दिएकी छन् ।
उनले लेखेकी छन् ‘हेलो, म कोभिड सं’क्रमित भएकी छु । म घरमै छु र मैले आफूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेकी छु । चिकित्सकको निर्देशन अनुसार सबै कोभिड नियमलाई पालना गरिरहेकी छु । तपार्इंहरु सबैको प्रेम र सहयोगका लागि धन्यवाद । सबैले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला’ ।
आलिया अघि रणवीर गत मार्च ९ मा कोभिड संक्रमित भएका थिए । आफू संक्रमित भएपछि रणवीर होम क्वारेन्टाइनमा थिए । यस अघि कार्तिक आर्यन, रणवीर, मनोज वाजपेयी, आमिर खान र तारा सुतरिया अमिताभ बच्चन , अभिषेक बच्चन, एश्वर्या राय जस्ता कलाकारहरुमा पनि कोरोना सं’कमण भइसकेको हो ।
प्रकाशित मिति २० चैत्र २०७७, शुक्रबार १२:२०